ဒူဒူကြီး: "Fire main system - Fire hydrants, fire hoses, fire nozzles and Automatic fire sprinkler system"
"Fire main system - Fire hydrants, fire hoses, fire nozzles and Automatic fire sprinkler system"
SOLAS Regulation အရ၊ GRT တန်ချိန် (၄, ၀၀၀) အောက် ခရီးသည်တင် သဘေ်ာ passenger ship တွေမှာ၊ independently driven fire pump အရည်အတွက်၊ အနည်းဆုံး (၂) လုံး၊ GRT တန်ချိန် (၄, ၀၀၀) နှင့် အထက်မှာဆို independently driven pump အရည်အတွက်၊ အနည်းဆုံး (၃) လုံး တတ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ကုန်တင်သဘေ်ာ cargo ship တွေမှာတော့ GRT တန်ချိန် (၁, ၀၀၀) အောက်မှာ power driven pump တလုံးနဲ့၊ independently driven pump တလုံး၊ စုစုပေါင်း pump (၂) လုံး တတ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ပါတယ်။ အလားတူ GRT တန်ချိန် (၁, ၀၀၀) နှင့် အထက်၊ cargo ship တွေမှာ independently driven fire pump က၊ အနည်းဆုံး (၂) လုံး တတ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ပါတယ်။
main switch board မှ၊ power ပေးကာ electric motor ဖြင့်မောင်းနှင်တဲ့ pump ကို power driven pump အဖြစ်၊ သတ်မှတ်ပါတယ်။ emergency switch board မှတဆင့်၊ power ပေးပြီး၊ electric motor ဖြင့်မောင်းနှင်တဲ့ pump ကိုတော့၊ independently driven pump အဖြစ်၊ သတ်မှတ်သလို၊ engine ဖြင့်မောင်းနှင်တဲ့ pump ကိုလည်း၊ independently driven pump အဖြစ်၊ သတ်မှတ်ပါတယ်။
Fig. Fire main system
GRT တန်ချိန် (၁, ၀၀၀) အောက် cargo ship တွေမှာ၊ emergency generator တတ်ဆင်ထားလေ့ မရှိတဲ့အတွက်၊ engine ဖြင့်မောင်းနှင်တဲ့ independently driven fire pump (၁) လုံးပါရှိရန် လိုအပ်ပါတယ်။ GRT တန်ချိန် (၁, ၀၀၀) နှင့် အထက်၊ cargo ship တွေမှာတော့ emergency generator တတ်ဆင်ထားပြီး၊ fire pump တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့၊ power ကို၊ main switch board မှမယူပဲ၊ emergency switch board မှရယူကာ၊ independently driven fire pump တွေအဖြစ်၊ အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် GS pump နဲ့ Bilge & Ballast pump တွေကိုလည်း၊ main fire line နဲ့ ဆက်သွယ်ကာ၊ fire pump အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
'Fire pump' ရဲ့ capacity ကို၊ 'Bilge pump' ရဲ့ capacity ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ ခရီးသည်တင်သဘေ်ာ passenger ship တွေမှာ၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့ Fire pump ရဲ့ capacity ဟာ၊ Bilge pump capacity ရဲ့ သုံးပုံပုံ နှစ်ပုံ (2/ 3) ထက် မလျှော့နည်းရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ကုန်တင်သဘေ်ာ cargo ship တွေမှာ၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့ fire pump တွေရဲ့ capacity ဟာ၊ SOLAS Regulation Part 1, Chapter II-1, Construction - Structure, Subdivision and stability, machinery and electrical installation, Regulation 21 - Bilge pump arrangement အရ၊ တတ်ဆင်ထားတဲ့၊ Bilge pump capacity ရဲ့ လေးပုံပုံ သုံးပုံ (3/ 4) ထက် မလျှော့နည်းရန် လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် cargo ship တွေမှာ၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့ emergency fire pump အပါအဝင်၊ fire pump တွေ တလုံးချင်းရဲ့ capacity ဟာ 25 m3/ hr သို့မဟုတ် 1500 m3/ min နှုံးထက်၊ မလျှော့နည်းရန် လိုအပ်သလို၊ pump တလုံးဟာ၊ အနည်းဆုံး water jet (၂) လုံးအား၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဖိအားပမာဏ pressure အတိုင်း ပေးနိုင်ရန်လည်း၊ လိုအပ်ပါတယ်။ fire hydrant တွေမှာရှိရမယ့် ရေ ရဲ့ pressure ဟာ၊ GRT တန်ချိန် (၄, ၀၀၀) အောက်ခရီးသည်တင် passenger ship သဘေ်ာတွေမှာ၊ 0. 30 N/ mm2 ဖိအားပမာဏနဲ့ တန်ချိန် (၄, ၀၀၀) နှင့် အထက် ခရီးသည်တင် passenger ship သဘေ်ာတွေမှာ၊ 0. 40 N/ mm2 ဖိအားပမာဏ ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်တင်သဘေ်ာ cargo ship တွေမှာတော့ တန်ချိန် (၆, ၀၀၀) အောက်မှာ၊ 0. 25 N/ mm2 ဖိအားပမာဏနဲ့ တန်ချိန် (၆, ၀၀၀) နှင့် အထက်မှာ 0. 27 N/ mm2 ဖိအားပမာဏ ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
fire hose တွေကို၊ non-perishable ဆိုတဲ့၊ အချိန်အကြာကြီး သိမ်းဆည်းထားပေမယ့်၊ ဆွေးမြေ့စုတ်ပြဲ၊ ပျက်စီးခြင်း မဖြစ်ပေါါနိုင်မယ့် synthetic rubber သို့မဟုတ် tetoron ကဲ့သို့၊ material တွေဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ fire hose အရည်အတွက် နဲ့ အရွယ်အစား၊ diameter ကိုတော့၊ SOLAS regulation ဖြင့် မသတ်မှတ်ပဲ၊ သဘေ်ာမှတ်ပုံတင်ထားရာနိုင်ငံမှ၊ ပြဌာန်းထားတဲ့ Merchant Shipping Act အရ၊ ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအနေနဲ့ (၂) လက်မနဲ့ (၂) လက်မခွဲ diameter အရွယ်အစားရှိတဲ့၊ fire hose တွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
fire hydrant အရည်အတွက်ကတော့၊ အသုံးပြုထားရှိရမယ့် fire hose ရဲ့ အလျှား၊ အရှည်ပေါါမူတည်ပါတယ်။ fire hydrant တခုမှာ၊ တတ်ဆင်ထားတဲ့ fire hose ရဲ့ အလျှားဟာ၊ နောက်ထပ် fire hydrant တခုအထိ၊ အမှီရောက်ရှိရန်လိုပါတယ်။ SOLAS Regulation အရ၊ ခရီးသည် (၃၆) ယောက်နှင့် အထက် သယ်ဆောင်မယ့် passenger ship တွေရဲ့ interior location မှာ၊ အနည်းဆုံး ၁၀ မီတာရှည်တဲ့ fire hose အား၊ အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်ထားတဲ့တွက်၊ (၁၀) မီတာ အကွာအဝေးတိုင်းမှာ၊ fire hydrant တခုစီ၊ တတ်ဆင်ထားရှိရန် လိုအပ်ပါတယ်။
GRT တန်ချိန် (၁, ၀၀၀) နှင့် အထက်၊ cargo ship တွေမှာ၊ fire hose ရဲ့ အလျှားဟာ မီတာ (၃၀) ထက်မနည်းရန် သတ်မှတ်ထားသလို၊ hose အရည်အတွက်အနေနဲ့ (၅) ခု ထက်မနည်း၊ ပါရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။ သဘေ်ာရဲ့ တည်ဆောက်ပုံအရ၊ machinery space, interior space နဲ့ open deck မှာတတ်ဆင်ထားရှိတဲ့ hydrant အရည်အတွက်နဲ့ ညီမျှတဲ့၊ fire hose တွေကို၊ ထားရှိရမှာဖြစ်သလို၊ စုစုပေါင်း hose အရည်အတွက်ထက်၊ တစုံပိုပြီး၊ အရံ spare hose အနေနဲ့ ပါရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ GTR တန်ချိန် (၁, ၀၀၀) အောက်မှာတော့၊ အနည်းဆုံး hose (၃) ခုပါဝင်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။
fire hydrant တွေတိုင်းမှာ၊ isolating valve တွေကို တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ hydrant ရဲ့ connection ဟာ၊ အသုံးပြုတဲ့၊ hose coupling အပေါါ မူတည်သလို၊ hose coupling ဟာလည်း၊ nozzles ရဲ့ connection type တွေအပေါါ မူတည်ပါတယ်။ အသုံးများတဲ့ coupling နဲ့ connection type တွေကတော့၊ Nakajama, Machino, John Morris, Nor, ANSI pin, ANSI slotter, French နဲ့ Storz Type တို့ဖြစ်ပါတယ်။
fire nozzles အမျိုးအစားတွေကို solid bore (or) smooth bore nozzle, single gallonage (or) variable pressure/ variable flow nozzle, adjustable gallonage nozzle, automatic (or) constant pressure nozzle နဲ့ multi-purpose nozzle ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ nozzle အမျိုးအစားတွေ ကွဲပြားပေမယ့်၊ မီးငြိမ်းသတ်ရာမှာ လုံလောက်တဲ့ ရေပမာဏကို၊ ထုတ်ပေးနိုင်ရန်၊ ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ရေဟာ လိုအပ်တဲ့ form ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်းရှိနေစေရန်နဲ့ မီးလောင်နေတဲ့နေရာသို့၊ တိကျစွာ ရောက်ရှိသွားစေရန် ဆိုတဲ့၊ အခြေခံအချက်တွေ အားလုံးကတော့ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ nozzles တွေမှ ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ main function (၃) မျိုးကို၊ control flow, provide reach နဲ့ crate shape ဆိုပြီး၊ အလွယ်တကူ မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ nozzle အတွင်းမှ orifice ဟာ၊ ရေရဲ့ flow ကို control လုပ်သလို၊ ရေရဲ့ pressure အား၊ velocity အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။
Fig. Multipurpose nozzle
မီးလောင်မှု အခြေအနေအပါါမူတည်ပြီး၊ ရေကို၊ strait steam အနေနဲ့ အသုံးပြုကာ၊ ငြိမ်းသတ်ရန်လိုအပ်သလို၊ တခါတရံမှာတော့ heat adsorption capability အနေနဲ့ အပူရှိန်ကိုလျှော့ချရင်းကာ၊ radiant heat protection အဖြစ် အပူရှိန်ပြန့်ကူးမှုကို တားဆီးပြီး၊ ရေကို spray အနေနဲ့ အသုံးပြုကာ၊ ငြိမ်းသတ်ရန် လိုအပ်တဲ့အတွက်၊ ရေရဲ့ shape သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းပုံ form အား၊ nozzle တွေမှ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ သဘေ်ာတွေမှာတော့ solid bore nozzles သို့မဟုတ် jet type nozzles တွေနဲ့၊ single gallonage nozzle လို့ခေါါတဲ့ spray nozzle သို့မဟုတ် fog nozzle တွေကို၊ အသုံးပြုခြင်းမရှိသလို၊ jet nozzle နဲ့ spray nozzle အဖြစ်၊ လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲသုံးစွဲနိုင်တဲ့၊ multi-purpose nozzles တွေကိုသာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
SOLAS regulation, Part 1, Chapter II-2 Construction - Fire protection, fire detection and fire extinction, Part C : Suppression of fire, Regulation 10.2.3.3.1 မှာ၊ 12mm, 16mm နဲ့ 19mm diameter အရွယ်အစားရှိတဲ့၊ nozzles တွေကိုအသုံးပြုရန်၊ ပြဌာန်းထားပါတယ်။ သဘေ်ာရဲ့ accommodation နဲ့ service space တွေမှာ၊ 12mm diameter အရွယ်အစား nozzles တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ machinery space နဲ့ exterior location တွေမှာတော့၊ 12mm diameter ထက်ကြီးပြီး၊ 19mm diameter အရွယ်အစား ထက်မပိုတဲ့ nozzles တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ 19mm diameter အရွယ်အစားထက် ပိုမိုကြီးမားတဲ့ nozzles တွေကို၊ အသုံးပြုမယ်ဆိုလျှင်၊ administration ဆိုတဲ့၊ သဘေ်ာမှတ်ပုံတင်ထားရာနိုင်ငံမှ၊ ပြဌာန်းထားတဲ့ Merchant Shipping Act အရ၊ ဆုံးဖြတ်ပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။
'Automatic fire sprinkler system' - မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခြင်းအား၊ သိနိုင်စေရန်၊ fire detection system တွေ တတ်ဆင်ထားသလို၊ မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခြင်းအား၊ သိရှိတာနဲ့ တပြိုင်နက်တည်းမှာ fire protection နဲ့ fire prevention လို့ခေါါတဲ့၊ မီးငြိမ်းသတ်ခြင်း တနည်းအားဖြင့် fire fighting ကို၊ အချိန်နဲ့ တပြေးညီဆောင်ရွက်နိုင်မှသာ၊ ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုအား၊ လျှော့ချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မီးလောင်ခြင်းအား ချက်ခြင်းသိရှိပေမယ့် fire main system မှ၊ 'ရေ' ကို အသုံးပြုကာ ငြိမ်းသတ်ခြင်းနဲ့ foam, CO2 အစရှိတဲ့ extinguishing system တွေ အသုံးပြုကာ ငြိမ်းသတ်ခြင်းတို့ကို၊ ဆောင်ရွက်ရာမှာ စနစ်တကျ fire plan ရေးဆွဲထားပေမယ့်၊ မီးငြိမ်းသတ်တဲ့ fire squid တွေရဲ့ တုန့်ပြန် အရေးယူဆောင်ရွက်မှု response နှေးကွေးကျန့်ကြာတတ်ခြင်း၊ FFA ဆိုတဲ့ fire fighting appliances တွေကို၊ ရုတ်တရက် အသုံးမပြုနိုင်ခြင်း၊ အစရှိတဲ့ အဖြစ်အပျက်၊ အကြောင်းအရာတွေ ပေါါပေါက်တတ်ပါတယ်။
ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာကို၊ လျှော့ချနိုင်ရန် တနည်းအားဖြင့် မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခြင်းအား၊ သိရှိတာနဲ့ တပြိုင်နက်တည်း အချိန်နဲ့ တပြေးညီ မီးငြိမ်းသတ်မှု ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ အလိုအလျှောက် မီးငြိမ်းသတ်ပေးနိုင်တဲ့ fire sprinkler system တွေကို၊ sensitive areas ဆိုတဲ့၊ မီးလောင်မှု၊ အလွယ်တကူ ပေါါပေါက်နိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာ၊ တတ်ဆင် အသုံးပြုကြပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် fire sprinkler system တွေကို၊ accommodation areas တွေ၊ machinery spaces တွေ၊ forecastle မှ၊ bosun store ကဲ့သို့ area တွေနဲ့ paint store area တွေမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
automatic fire sprinkler system မှာ၊ pressure water tank မှတဆင့်၊ အလိုရှိတဲ့ compartments တွေအထိ ရေကို piping တွေသွယ်တန်းကာ၊ sprinkler heads တွေတတ်ဆင်ပြီး၊ မီးငြိမ်းသတ်ပါတယ်။ water tank ရဲ့တဝက်လောက်အထိ၊ fresh water ကိုဖြည့်သွင်းထားပြီး၊ compressed air ကိုလည်း pressure တန်ဘိုးတခု ရရှိလာသည်အထိ၊ ဖြည့်သွင်းထာပါတယ်။ အဝေးဆုံး ဒါမှမဟုတ် အမြင့်ဆုံးနေရာမှာ တတ်ဆင်ထားတဲ့၊ sprinkler head အထိ၊ ရေလုံလောက်စွာ ပေးပို့နိုင်ရန်၊ pressure tank မှာ၊ 4.8 bar ထက် မလျှော့နည်းတဲ့ pressurized တန်ဘိုးတခုရှိနေဖို့၊ လိုအပ်ပါတယ်။
Fig. Automatic fire sprinkler system
sprinkler heads တွေကို တတ်ဆင်နေရာချထားရာမှာ၊ area တွေအလိုက်၊ section တွေခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပြီး၊ section တိုင်းအတွက်၊ alarm system တွေကို၊ ခွဲခြားတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ sprinkler heads တွေကို တတ်ဆင်ရာမှာ section တခုအတွက် sprinkler heads အရည်အတွက် အလုံး (၂၀၀) ထက်ပိုပြီး၊ အသုံးမပြုရန် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ sprinkler heads တွေမှာ၊ quartzoid bulbs တွေပါဝင်ပြီး၊ မီးလောင်တဲ့အခါ၊ compartment ရဲ့၊ အပူချိန်မြင့်တက်လာသလို၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ limit သို့ရောက်ရှိသွားချိန်မှာ quartzoid bulb ဟာ၊ ကွဲထွက်သွားပြီး၊ sprinkler head မှတဆင့် ရေကို စတင်ဖြန်းပက်ပါတယ်။
Fig. Sprinkler head
quartzoid bulbs တွေရဲ့၊ temperature limit ကို၊ colour code ဖြင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အနီရောင် bulb ရဲ့ temperature limit ဟာ၊ 68 deg C, အဝါရာင် bulb ရဲ့ temperature limit ဟာ၊ 80 deg C နဲ့ အစိမ်းရောင် bulb ရဲ့ temperature limit ဟာ၊ 93 deg C ဖြစ်ပါတယ်။ SOLAS Regulation အရ တတ်ဆင်အသုံးပြုတဲ့ sprinkler head တလုံးခြင်းဟာ၊ ၁၆ စတုရန်းမီတာ ဧရိယာပမာဏကို၊ တမိနစ်မှာ ရေပမာဏ ၅ လီတာနှုံးနဲ့ ဖြန်းပက်နိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
sprinkler head ကို၊ semicircular ပုံသဏ္တွန်ရှိတဲ့၊ quartzoid bulb မှဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ bulb ထဲမှာ၊ expandable liquid တမျိုးကို ထည့်သွင်းထားပြီး၊ deflector plate ဖြင့်တွဲဆက်ကာ၊ တတ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ sprinkler head တွေမှာ၊ corrosion မဖြစ်ပေါါစေရန် fresh water ကိုသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ pipeline ထဲက၊ pressure ကျဆင်းသွားခဲ့လျှင်၊ pressure ကျဆင်းသွားတဲ့ section အတွက် alarm အနေနဲ့၊ အသိပေးဖော်ပြမှာဖြစ်သလို၊ pressure tank ထဲမှာ ရေကုန်သွားတဲ့အခါ၊ sea water pump မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရန်၊ sea water pump ကိုလည်း၊ ထည့်သွင်း တတ်ဆင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
Reference and image credit to : http://www.engarena.com/, http://soniachou.en.ecplaza.net., General Engineering Knowledge by H.D McGeorge, SOLAS Regulations., The Design and Layout of Fire Sprinkler Systems By Bromann, M, Oxfordshire: CRC Publications, 2nd edition, 2001,
Posted by ကိုထွန်း at 16:27
"International shore connection and Fire control p...
"Fire main system - Fire hydrants, fire hoses, fir...
"Fire detecting system sensors"
"Operation of Servo-valve inahydraulic actuator"...